Dhoohanoow Ogsoonow: Bye: Maxamed Cumar Muude | Harowo.com
Qaar ka mid ah Shaqaalihii lagu laayay Xarunta UNDP ee Muqdisho iyo Wadamada ay u dhasheen
Dhoohanoow Ogsoonow: Bye: Maxamed Cumar Muude
In dhawaydba waxa taagnayd muran ay xukuumada somaliland ka dhalisay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Saylac, taasoo sobob u ah inay ka dhacaan kacdoono isdaba jooga degmooyinka Boorama iyo Saylac oo asal ahaan kasoo jeeda Boqortooyadii Adal oo ay dhamaantood madax ka ahaayeen maamuladii Adal iskasoo daba maray Ugaasyadii Beelaha Gadabuursi.
Shalay oo ay taariikhdu ahayd 30 – December – 2012 ayaa niman hawaawi ku jira oo kasoo kici timay magaalo madaxda Gobolka Waqooyi Galbeed ee Hargeysa waxay soo dhexgaleen Kacdoon dadweyne oo ku jihaysan Farigelinta Beesha dhexe iyo xukuumada SNM ay ka wado magaalada Saylac.
Weftigan oo la socday arin Qarow ah oo laga soo aloosay Madaxtooyada Somaliland waxay sababtay dhimasho iyo dhaawac ay si taxadar la’aana oon inaba Caqli banii aadam ku jirin loogu geystay da’yartii ku dhaqnayd magaalada Boorama.
Hadaan nahay waxgaradka iyo aqoonyahanka kasoo jeeda Gobolka Awdal waxaanu ku baaqaynaa
1) in si degdeg ah weftigu uga baxaan magaalada Boorama.
2) In ay madaxa u saran tahay dhimashadii iyo dhaawacii sida axmaqnimada ah loogula kacay d’yartii aan waxba galabsan ee magaalada
3) In arinta Saylac lagu dhameeyo sida dastuurku dhigayo lana mid tahay degmooyinka dhigeeda ah
Hadii la yeeli waayo waxa iman doonta halheyskii ahaa “Soomaaliya iyo Kala tega”
Waxan kaga baxayaa Tixdan oo aan ku cabirayo dareenkayga. Isla markaana fariin aan ugu dirayo cid kasta oo iska dhego tiraysa xaqiiqda.
Saylac waa dhulkaygii Waana dhalashadaydii
Saylac waa dhulkaygii
Soo dhici haddaad tiri
Waan waxaa dhaceenoow
Aniga horteed dhiman
Saylac waa dhulkeygii
Dhabtii waxay kutaalaa
Dhabarka iyo feeraha
Naftu meel aykadhawdahay
Qore: Maxamed Cumar Muude
This post has been viewed 78 times.
Related Posts via CategoriesSweden oo Soomaali badan dalkeeda……Daawo Hees Cusub Oo Macaan Oo Waliba Ay Qaadeyso Fanaanad Reer Awdal Ah Oo Fanka Ku Cusub Waa Aniisa Dheeman.Kaa’in la yaableh oo habeen walba kula seexda iyo Nimcada Muslimiintu haysato ee ay moogantahay. Akhri waa aqoon kaa maqaneReer Saylac oo prof Samatar ku casuumay qeybaha kala duwan ee Saylicga . VIDEOBooqashii Maayerka SAYLAC ee tuulada Fiqi aadan. VIDEONoolaha kaliya ee ugaadhsada Maska Daawo AME(mongoose) iyo COBRE Waxa kala qabsadayTan oo kale inay adduunka ka dhacdo waa ay dhinayd. VIDEOMaxay hibasho ii tari hiil Allaah jiree, Waa sheekadii DOOB MA KARE ee bal nala dhuuxMadaxweynaha Mareykanka Oo Meel Mariyay Hub Dowladdiisa Ay Siiso Dowladda Soomaaliya.TV-ga Universal oo xarun ka furtay Boorama iyo Maamulka Degmada iyo ka gobolka oo kasii dar-daar warinaya wararka ka bixi doona Tv-ga
Posted by haro3468 on Dec 31 2012. Filed under Xulka Qoraha.
WARARKII HORE EE KU DHAAFAY HALKAN KA RAADI	June 2013 (124)